भुपेनको यात्रा : भलिबलबाट तेक्वान्दोमा फड्को मारेको साढे ३ वर्षमै सागमा स्वर्ण
मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङका भुपेन श्रेष्ठ (२०) ले तेक्वान्दो शुरू गरेको भर्खरै साढे ३ वर्ष भयो । यसबीचमा उनले हासिल गरेको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि हो- सागमा स्वर्ण ।
उनले भारतीय खेलाडी अक्ष हुडालाई पराजित गर्दै ८७ केजी मुनि तौल समूहमा तेक्वान्दोबाट स्वर्ण पदक जितेका थिए ।
सागमा स्वर्ण पदक जितेका भुपेनको रुचि पहिला भलिबलमा थियो । उनी स्कूलमा भलिबल खेल्थे । 'बाबाले मलाई भलिबल हेर्न पनि लैजानुहुन्थ्यो । बाबाको चाहना मलाई भलिबल प्लेयर बनाउने थियो,' उनले बाल्यकाल कोट्याए । भुपेनका बुवा पनि भलिबल खेलाडी थिए पहिला । त्यसैले उनी छोरालाई पनि जसरी हो भलिबल खेलाडी बनाउन चाहन्थे । एसएलसीपछि उनलाई बुवाले भलिबल ट्रेनिङ गराउने उद्देश्यले नै काठमाडौं ल्याएको भुपेन बताउँछन् ।
'एपीएफमा गएँ । त्यहाँ कन्ट्र्याक्टको खेलाडी नराख्ने भनेर मैले पढाइमा बढी जोड दिन थालेँ,' परिपक्व भलिबल खेलाडी बन्न गरेको संघर्षका दिन सम्झिए उनले ।
भुपेन ११ कक्षा पढ्दा नाकाबन्दी भएको थियो । त्यतिबेला उनी तिनकुनेमा बस्थे । उनी घर फर्कँदा बाटोमा तेक्वान्दोको बोर्ड देख्थे ।
'मेरो एउटा साथीले म पनि ट्रेनिङ गर्न जान लागेको भन्यो । अनि मैले उसलाई म पनि जान्छु नि भनेँ,' उनले लोकान्तरसँग भने, ' मैले साथीलाई सेल्फ डिफेन्सका लागि तेक्वान्दो सिक्न मन छ भनें ।'
त्यसपछि उनले घरमा कुरा गरे । बुवाले 'ल सिक' भन्दै अनुमति दिए । अनि भुपेनको तेक्वान्दो यात्रा शुरू भयो ।
उनले सम्झिए, 'नविन गुरुले पनि हाइट राम्रो देखेर यसले राम्रो खेल्न सक्छ भन्नुभयो ।'
उनलाई तेक्वान्दोको लत यस्तो लाग्यो कि शुरूआती दिनमै दिनमा दुई पटक बिहान-बेलुका ट्रेनिङ गर्थे ।
सिक्दै गर्दा गेमहरू खेलिरहेको हुन्थे, इन्टर डोजाङहरू खेल्थे ।
सातौं राष्ट्रिय खेलकुदको क्षेत्रीयमा पनि उनले खेले । त्यहाँ हारे । हारे पनि खेल्दै गए ।
काठमाडौंमै फस्ट काठमाडौं इन्टरनेसनल तेक्वान्दो भएको थियो । त्यहाँ उनले ब्राउन्च मेडल जिते । उनले इन्टर डोजाङहरू कहिँ पनि गोल्ड मेडल जितेका थिएनन् । उक्त मेडलले अझै मेहनत गर्न हौसला दियो ।
उनले १२ कक्षा सकेपछि इटहरीमा एउटा फ्रेन्डशिप गेम खेले ।
'सबैले अनुभव पनि हुन्छ, खेल भनेर इटहरीमा गेम खेलेँ । त्यहाँ गोल्ड मेडल जितेँ । त्यो नै मेरो पहिलो गोल्ड मेडल हो,' उनले पहिलो गोल्ड मेडलबारे भने ।
उनले आफूले तेक्वान्दोमा सफलता हासिल गर्दै जानुमा 'नविन गुरु'को सहयोग रहेको स्मरण गरे । सम्झिन्छन्, 'छुट्टीमा मलाई नविन गुरुले जाउ नेसनल टीममा ट्रेनिङ गर भन्नुहुन्थ्यो । अनि मेरो त्यहाँ राम्रो ग्रो भयो । ली कोची र नेसनल टीमका दाईहरूसँग सिकेर न म अहिले यो अवस्थामा आइपुगेको छु ।'
०७४ मा भुपेनले नेसनल गेममा गोल्ड मेडल जिते । अनि एसियन गेमको तयारीमा लागे । 'शुरूमा त एसियन गेमको सेलेक्सनमा हारे । तर पछि माथिल्लो वेटको केटा भएन । मेरो हाइट राम्रो भएर पनि होला गुरूहरूले मलाई चान्स दिनुभयो,' राष्ट्रिय टीमको यात्राबारे उनले भने,'सक्षम कार्की 'दाई' इन्जुरी भएका कारण म जान पाएँ । ट्रेनिङ गर्न कोरिया तथा एसियन गेम खेल्न इन्डोनेसिया गयौं ।'
एसियन गेममा उनले एक फाइट पनि जितेनन् । किनकी त्यो उनले खेलेको अहिलेसम्मकै ठूलो प्रतियोगिता थियो । अनुभव खासै थिएन । 'त्यस्तो ठूलो गेम कहिल्यै पनि खेलेको थिइनँ । जे भएपनि त्यहाँबाट मैले धेरै राम्रो अनुभव हासिल गरेँ । त्यो त केही पनि होइन । मैले धेरै सिक्न बाँकी छ,' उनी सम्झिन्छन् ।
त्यसपछि आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा गोल्ड मेडल जिते । अनि शुरू गरे- स्वर्ण पदक जित्ने लामो यात्रा ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदपछि उनी इन्डिया ओपन खेल्न गए । त्यहाँ पनि गोल्ड मेडल ल्याए । त्यसपछि उनी सागको सेलेक्सनमा लागे ।
सागको फस्ट सेलेक्सनमा उनले अनोज पुजारीलाई हराए अनि दोस्रो सेलेक्सनमा रामदत्त भट्टलाई । अनि ८७ केजी मुनि तौल समूहमा साग खेल्ने सुनौलो अवसर पाए ।
त्यहाँबाट ट्रेनिङ गर्न जापान गए । १५ दिनको ट्रेनिङ सकेर उनी चीन पुगे । चीनमा पनि गेम खेले । त्यहाँ पनि ब्राउन्च मेडल जिते ।
उनी चाइना ओपनले गर्दा आफूमा साग गेममा हाम्रो प्रदर्शन गर्ने आशा जगाएको बताए ।
'चीनमा आफूभन्दा अग्ला खेलाडीहरूसँग पनि खेल्ने मौका पाएँ, जुन बेस्ट मार्क भयो,' भुपेनले भने ।
सागमा ८७ केजी मुनि तौल समूहमा चार जना मात्रै थिए । शुरूमा बंगलादेश र भुपेन भिडे । बंगलादेशसँग खेल्न उनलाई त्यस्तो गाह्रो भएन । स्कोरिङमै जिते । सागको अनुभव बताउँदै भने, 'इजिली जितेको थिएँ । नर्भस पनि भइनँ, जित्छु भन्ने थियो ।'
फाइनलमा उनलाई केही सहज भयो । कारण पहिल्यै हराइसकेको भारतीय खेलाडीसँग भुपेनको भिडन्त हुने भयो । 'फाइनलमा मैले इन्डिया ओपनमा जितेको केटासँग पर्‍यो । उसलाई पहिल्यै हराएको कारण सागमा पनि जित्छु भन्ने थियो,' फाइनलबारे उनले भने, 'तर हाम्रो गेम एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक भयो । मैले स्कोर ल्याएलगत्तै उसले पनि ल्याइहाल्ने । तर लास्टमा ३ अंकले मात्रै जितेँ । फाइनल टफ नै भयो ।'
उनको खेल हेर्न बुवा र बहिनी आएका थिए । दर्शकदीर्घाबाट खेल हेरिरहेका बुवाले छोराले जितेपछि भने- यू डिड इट छोरा ! त्यो भुपेनले पनि सुने । बुवा खुशी हुँदा भुपेन पनि दंग थिए ।
उता खेल सकिएलगत्तै उनलाई ममीले फोन गरेका रहेछन् । तर उनले थाहा पाएनन् । इन्टरभ्युतिर व्यस्त थिए । पछि म्यासेज पनि देखे-कंग्राचुलेसन छोरा !
ममीको म्यासेजपछि उनी एकदमै खुशी भए । भन्छन्- अर्कै फील भएको थियो ।
एन्फा १३ वर्षमुनिका फूटबल खेलाडी छनोट गर्दै
आङछिरिङ शेर्पाको स्मृतिमा गल्फ प्रतियोगिता हुने